မကြာခင် ထွက်ရှိလာတော့မယ့် Free Fire ရဲ့ Operation Chrono – Gaming Noodle
မကြာခင် ထွက်ရှိလာတော့မယ့် Free Fire ရဲ့ Operation Chrono
၂၀၂၀ ခုနှစ်ရဲ့ Mobile Game of the Year ဆုကို ရရှိထားတဲ့ Free Fire ဟာ ကစားသူဦးရေ လျှင်မြန်စွာ တိုးပွားလာနေတဲ့ Battle Royale ဂိမ်းကောင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာ ကမ္ဘာ့စျေးကွက်ရဲ့ Download ဆွဲယူခံရမှု ကြိမ်ရေ အများဆုံး မိုဘိုင်းဂိမ်း ဖြစ်သလို ၂၀၂၀ ခုနှစ်မှာလည်း အရှိန်အဟုန်ကျမသွားဘဲ ကိုးလတာ အတွင်း Download ကြိမ်ရေ သန်း ၂၀၀ ကျော် ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကစားသူတွေအတွက် Event တွေသာမက Esports မြင်ကွင်းမှာပါ အားကြိုးမာန်တက် ပါဝင်လာတဲ့ ဂိမ်းဆိုလည်း မမှားပါဘူး။
Free Fire ကို ဒီရက်ပိုင်းဆော့နေသူတွေအတွက် Chrono Logo တွေ နေရာတိုင်းမှာ တွေ့နေရတယ်။ Chrono ဆိုတာ ဘာဖြစ်မလဲ? Free Fire က အရင်ကလည်း Collab အကြမ်းကြီးတွေ လုပ်‌လေ့ရှိတာကြောင့် ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း ဘယ်လို Collaboration မျိုးလာမယ်ဆိုတာ တွေးကြည့်ရင်းနဲ့တောင် စိတ်လှုပ်ရှားနေပါပြီ။ ဘော်ဒါတွေရော Chrono က ဘာဖြစ်မယ်ထင်လဲ?
လာမယ့် ဒီဇင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့ ၂၀၂၀ ခုနှစ်မှာ ကမ္ဘာကျော် ကြယ်တစ်ပွင့် နဲ့ အတူ အကျိူးတူ ပူးပေါင်းသွားဖို့ ရှိပါတယ်။ ဒီပူးပေါင်းမှုကိုတော့ Operation Chrono လို့ အမည်ပေးထားပါတယ်။ Operation Chrono ဟာ နှစ်လိုဖွယ်ရာ မကောင်းတဲ့ အနာဂါတ်ရဲ့ ကမ္ဘာပျက်ကြီးမှာ အခြေခံထားပြီးတော့ အဲ့ဒီ ကမ္ဘာမှာ ခေတ်‌ရှေ့အပြေးဆုံး နည်းပညာတွေလည်း ရှိနေမှာပါ။ ဒီလို အပျက်အစီးတွေ ကြားမှာ လူတွေအားလုံး လေးစားအားထားရမယ့် လူစွမ်းကောင်း တစ်ယောက်အတွက် နေရာ ရှိနေပါတယ်။
လောလောဆယ်မှာတော့ အသေးစိတ်ကို ပြောပြလို့မရသေးပေမယ့် သေချာတာကတော့ ဒီ အကျိုးတူပူးပေါင်းမှုဟာ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဂိမ်းလောက အတွက် စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ အကောင်းဆုံးနဲ့ လူပြောအများဆုံး ပူးပေါင်းမှု ဖြစ်လာမှာပါ။
နောက်ထပ် သဲလွန်စများကို လာမယ့်ရက် အနည်းငယ် အတွင်း Garena Free Fire မြန်မာပေ့ချ် ကနေ ဖော်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်လို့ စောင့်မျှော်ကြည့်ရှု ပေးပါဦး။
#FFMM #FFMMR #FreeFireMM #OperationChrono